यसै coinage, यो उपकरण प्रयोग गरिन्छ जो, साथै स्मारिका सिक्का को उत्पादन मा छोयो कि बताउँछन्।
पैसा - कहिल्यै समय अतिप्राचीन, मान्छे व्यापार मा, जसमा प्रक्रिया र आवश्यकता विनिमय एक सार्वभौमिक बराबर सिर्जना गर्न संलग्न देखि। सुरुमा, आफ्नो भूमिकाको बहुमूल्य धातु थिए, वा बरु, तिनीहरूको बारहरू (जस्तै भनिन्छ "hryvna" र रूस मा प्रयोग), तार वा टुक्रा। तर चाँडै तिनीहरूले सिक्का द्वारा, स्थिर वजन एक परिणाम, नाममात्र मूल्य रूपमा प्रतिस्थापित र, थिए। तिनीहरूले पनि बहुमूल्य धातु coinage बनेको र बलियो राज्य प्रत्येक एक दृढता थियो। निस्सन्देह, यो सिक्का को उपस्थिति देश वा क्षेत्र निर्भर व्यापक फरक हुन्छन्।
र हाम्रो जीवनमा कागज पैसा को आगमन संग, सिक्का परिसंचरण बाहिर निकालियो थियो। तथापि, लगभग सबै दुनिया भर अब तिनीहरूले साधारण फलाम वा गैर-फलाम धातु को एक मिश्र धातु बनेको छन्।
यस प्रक्रियामा, रूस मा coinage रूपमा, सार्वजनिक पकड टकसालों। रूप सिक्का सधैं सीधा मात्र होइन उमेर मा तर पनि देशमा राजनीतिक प्रणाली निर्भर। इतिहास को पाठ्यक्रम मा विभिन्न राजनीतिक regimes प्रतिनिधिको आफ्नो अनुकूल विशेषताहरु संग परिसंचरण बैंकनोट्स मा भएको थियो। यो स्मारिका सिक्का chasing छ - तर, विशुद्ध व्यावहारिक उत्पादन बाहेक, त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व छ अर्को दृश्य छ।
अक्सर, जो पनि लागू मौद्रिक संकेत हो जो Jubilee, पर्छ, तर तिनीहरूले उत्कीर्णन वा फारम बाँकी फरक। अक्सर तिनीहरूको जारी विश्व वा देशमा केही ऐतिहासिक घटना गर्न समय सकियो छ। एक स्मारिका नै मूल्य, जस्तै प्रदर्शन को एक संग्रह रूपमा मात्र हुन्। तर कहिले काँही उनि जस्तै चाँदी वा सुन रूपमा बहुमूल्य धातु बनाइएका छन्। पसलमा पक्कै छैन बाहिर छ तिनीहरूलाई तिर्न, तर तपाईं एक बराबर मूल्य लागि बैंक संग व्यापार वा धरौटी सुविधा पसल मा बेच्न चाहेको गर्न सक्नुहुन्छ भने।
अब, खैर, विनिर्माण स्मारिका सिक्का र निजी कम्पनीहरु गर्छन्। सेवाहरूको स्पेक्ट्रम को को workpiece गर्न प्रत्यक्ष स्थानान्तरण समाप्त, अनुपम स्केच को तैयारी देखि लिएर, धेरै व्यापक छ। भौतिक पनि चयन गर्न सकिन्छ।
वास्तवमा, शब्द "coinage" छैन एकदम साँचो हो। त्यसैले हामी हथौडा हडताल गरेर workpiece मा छवि स्थानान्तरण प्रक्रिया भनिन्छ। तर यो विधि औद्योगिक उत्पादन मा अदक्ष छ र केवल सानो पैसा को निर्माण को लागि उपयुक्त छ। साथै, छवि अक्सर धमिलो छ।
को workpiece इच्छित ढाँचा हस्तान्तरण गर्दा अब सिक्का एक तथाकथित प्राइमर (को पट्टी किनारा कोटिंग) र इम्बोस गरिएको, प्रेस को सहायता संग प्रयोग निर्माण गर्दा।
सुरुमा, मध्य युग मा, स्क्रू प्रेस, लीवर को परिक्रमा को माध्यम र इम्बोस गरिएको भयो गर्दा प्रयोग, तर यो लामो प्रक्रिया हो र सिक्का को औद्योगिक उत्पादन लागि उपयुक्त छ।
तर सेन्ट पीटर्सबर्ग मा XIX सताब्दी इन्जिनियर Nevedomsky को सुरुमा एक सनकी minting सिर्जना गरिएको थियो मिसिन। उनको प्रदर्शन पहिले नै निर्माण पैसा स्ट्रिम लागि थप उपयुक्त छ जो लगभग 70 प्रति मिनेट सिक्का थियो।
Coinage। औद्योगिक उपकरण र मनोरंजन
बस राख्नु, औद्योगिक उपकरण - यो नै समाचार हो, तर स्वचालन को एक उच्च डिग्री संग। आफ्नो काम मा, मुख्य मापदण्ड उच्च गति र शून्य दोष हो।
अवैतनिक उपकरण - एक कम्प्याक्ट उपकरण जसको प्रदर्शन धेरै कम छ। तर छवि गुणस्तर सर्व महत्व छ। जो कोहीले आफ्नो स्मारिका सिक्का को उत्पादन सेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अप यस्तो उपकरणहरू कम्पनीहरु को एक किसिम प्रदान गर्दछ।
तर, हामी वर्तमान नक्कली बैंकनोट्स व्यवस्था द्वारा punishable छ कि बिर्सनु हुँदैन।
धातु काटन पानी (पानी जेट काट्ने): प्रविधि र सञ्चालनको सिद्धान्तहरू
चिनियाँ ट्यांक "प्रकार-96"। चिनियाँ ट्यांक को अवलोकन
कवच 12 निर्माण फिटिंग: उत्पादन, वजन, मूल्य
कसरी एउटा च्यानल चयन गर्न
एक बिजुली उचाल्नु के हो? ठाडो उठाने सामान लागि बिजुली उचाल्नु
उल्टो-असमस पानी शुद्धीकरण सिस्टम
Sensitization - यो ... नै अवधि को विभिन्न अर्थ मा
छत वा बार लागि sheeting को गणना
नयाँ जन्मको लागि "फेनिस्टिल जेल" - औषधि क्याबिनेटमा पहिलो उपाय
को "पत्ता लगाउनुहोस्" को लागि टिप्पणीहरू। कसरी "स्कूलका साथीहरू" मा एक हास्यास्पद टिप्पणी गर्न?
आफ्नै हातमा देश मा एक पूल कसरी बनाउने? यो समस्याको सरल समाधान
गृह लोक उपचार मा exacerbations को गाउट उपचार। एक अस्पताल मा गाउट उपचार, एक शल्य विधि। के आहार हुनुपर्छ?
Snowboarding - उपकरण प्रशिक्षण3दिन
छत: मूल्यहरु, योजनाहरु, स्थापना। छत बाडको परीक्षण
अभिनेता Alexei Makarov: Filmography
छाँट्ने लागि अङ्गुर shrubs बढ्न सुरु